Ithegi: ukuhambahamba ngokuzenzekelayo | Martech Zone
Maka: ukuhamba ngokuzenzekelayo
Ixabiso lokwakha kuwo onke amaNyathelo oHambo lwaBathengi bakho
NgoMgqibelo, Julayi 17, 2021 NgoMgqibelo, Julayi 17, 2021 UJim Berryhill
Ukuvala ukuthengisa ngumzuzu omkhulu. Kuxa unokubhiyozela wonke umsebenzi osele ufumene umthengi omtsha. Kulapho iinzame zabo bonke abantu bakho kunye neCRM yakho kunye nezixhobo zeMarTech zisiwe. Yipop-champagne kwaye uphefumla umzuzu wokuphumla. Kukwasisiqalo nje. Ukuqhubela phambili ukucinga amaqela athatha indlela eqhubekayo yokulawula uhambo lwabathengi. Kodwa ukuhanjiswa phakathi kwezixhobo zemveli kunokushiya
IConga Contract Lifecycle Management: Ukuphucula ukuSebenza ngokuThengisa ngamaXwebhu okuSebenza ngokuZenzekelayo
NgoMgqibelo, Oktobha 10, 2020 NgoMgqibelo, Oktobha 10, 2020 Douglas Karr
Ukuqhuba ishishini eliziva lingenangxwabangxwaba kumthengi ebusweni bentengiso ekhulayo kubunzima akukho lula. Ubungcali baseConga kunye nesisombululo esibanzi kwimisebenzi yorhwebo-iinkqubo ezimalunga nokuQulunqa amaxabiso amaxabiso (i-CPQ), uLawulo lokuPhila kwabaThengi (i-CLM), kunye namaXwebhu amaDijithali- anceda amashishini ajongane nobunzima ngokuzithemba ukuze abonelele ngamava abathengi angenachaphaza kunye nokukhawulezisa ingeniso. NgeConga, amashishini ahamba ngokukhawuleza ukuhlangabezana neemfuno zabathengi namhlanje ngelixa esonyusa amandla
IsiqulathoVerse: Ulawulo loXwebhu kunye noKwenziwa kokuSebenza kokuZenzekelayo
NgoMvulo, Matshi 3, 2014 Douglas Karr
Uninzi lwehlabathi elidibeneyo lisasebenzisa kwaye lithumela umxholo wabo ngokusebenzisa amaqonga eOfisi yeMicrosoft. Ukuba ufuna ukugcina uguqulelo kuhlobo lwamaxwebhu akho kunye nokuzenzekelayo kokuhamba komsebenzi, phantse akunakwenzeka ngaphandle kwesixhobo esifanelekileyo sokuhamba komsebenzi kunye noxwebhu lokugcina uxwebhu ngelixa usebenzisana. Iiarhente zentengiso-ngakumbi ngeendlela zokuthengisa umxholo-zivelisa itoni yalo mxholo kwizicelo zesiko ze desktop. Kwaye ukusebenza kwenkqubo yokusebenza akusoloko kuyindlela elula